Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Seychelles ịkekọrịta nghọta ihu igwe na mkpokọta COP
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Okwu Nlegharị Anya
Steen G. Hansen na nchịkọta akwụkwọ gburugburu ya na ihu igwe Seychelles
COP ga -akpọkọta ọtụtụ ndị ama ama ọnụ ka ha kpaa maka ihe ekwesịrị ime na mgbanwe ihu igwe, Steen N. Hansen na -ekwu, bido site n'ịmata ihe dị adị, wee chekwaa ihe a hụrụ ka ọ dị. Mazị Hansen nraranye ya maka okike na njikwa ihe okike na -eme ka ọnọdụ ụwa dị n'okpuru nrụgide karịa mgbe ọ bụla ọzọ.
Gburugburu ebe a dị ugbu a na atụmatụ onye ọ bụla dịka mgbanwe ihu igwe na -eme onwe ya n'akụkụ anọ nke ụwa.
Ndị Seychelles na -akwado onwe ya maka ime ka ụwa mata na ichekwa ihe agwaziri agwaetiti ndị ahụ na olileanya na onye ọ bụla ga -agbaso.
Hansen edeela ọtụtụ akwụkwọ mkparịta ụka, echiche, yana akụkọ gbasara okike na njikwa okike.
A zuru usoro nke akwụkwọ niile dabeere na ihe Seychelles nwere akụ pụrụ iche na gburugburu ebe obibi Ọ bụ Steen N. Hansen, onye Dutch bi na Seychelles, nyere ya. Nwunye ya Seychelles, Marie France na -enyere ya aka n'ịkwado ka amara ọrụ ha dị ogologo ma sie ike.
Hansen bụ nwa amaala Denmark mụrụ na 1951. Ọ bụ na 2015 ka ọ kwagara Seychelles wee lụọ otu afọ ka ọ gachara na Seychelles wee nye ya ikike ibi na Republic of Seychelles na 2019.
Hansen na -ejide nna ukwu na bayoloji yana nzere bachelọ na geography na geology (ha niile sitere na Mahadum Copenhagen) yana n'asụsụ na ọdịbendị German (site na Mahadum Odense, Denmark). Tupu ọ bịarute na Seychelles, Maazị Hansen rụrụ ọrụ dị ka onye na -ahụ maka ihe gbasara ndụ na onye isi nkuzi na ọkwa mahadum. O nwere mmasị karịsịa na nchekwa gburugburu ebe obibi wee dee ọtụtụ akwụkwọ mkparịta ụka, nlele, yana akụkọ gbasara okike, njikwa ihe okike, na ọbụna ihe oriri sitere na mkpụrụ ndụ ihe nketa.
Na Seychelles, ọ gara n'ihu na-enwe agụụ maka okike na njikwa ihe okike site na ide Flora nke Seychelles nke e sere na mbụ na nke zuru oke site na 2016 (ibe 725) gbakwunyere ọtụtụ akwụkwọ pere mpe ma dịkwa mfe ọgụgụ nke na-egosi akụ akụ na ụba na Seychelles. enwere ike ikwu Osisi mara mma nke Aride Island (2016); Vallée de Mai - Primeval Palm Forest, Reserve Nature na UNESCO Heritage Site (2017); Ọdịdị mara mma nke agwaetiti Curieuse (2017); Ogige Botanical National nke Seychelles (2018); Ụlọ ọrụ Tea, Trazọ Nature ya na Morne Blanc (2018); Le Jardin du Roi Spice Ogige (2018); National Biodiversity Center nke Seychelles (2019); na ọhụrụ Le Ravin de Fond Ferdinand - Nchekwa Pụrụ Iche na Praslin (2021) ebe ọ na -elekwasị anya mgbalị nhazi na nchekwa na -esote igosi nhọrọ nke osisi na anụmanụ.
N'egwu dị egwu, ụdị osisi 3 ma ọ bụ anụmanụ na -apụ n'anya kwa elekere elekere, n'ihi nke a "anyị nọ na nsọtụ ka anyị bụrụ ụdị nke mbụ ga -enwe ike idekọ mkpochapụ anyị ma ọ bụrụ na emeghị ihe ọ bụla ugbu a" (Dr. Christiana Pasca) Palmer, onye isi UN maka ụdị ihe dị ndụ). Na naanị ụzọ ị ga-esi pụọ, na-eso Maazị Hansen, bụ ime ka ọha na eze mara nke ọma site na ịmara ụwa anyị dị oke ọnụ ahịa na ọnọdụ ya dị oke egwu site nyocha onwe onye, ​​yana ọrụ Mr. Hansen-na okwu nke ya - bụ naanị obere onyinye na umeala.